मेरो प्यानल समावेशी भएकाले जित्ने निश्चित छ «
आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा करण चौधरी र धु्रवबहादुर थापा चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । अटोमोबाइल व्यवसायबाट नै उदाएका चौधरी र थापाबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान पनि गरिएको छ । उनै अध्यक्षका दाबेदार थापासंँग आगामी निर्वाचनका एजेन्डालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :
नाडाका धेरै सदस्यको साथ, सहयोग र शुभेच्छा मप्रति रहेको छ । नाडाका सबै सदस्यहरू (कर्पाेरेट र जनरल व्यवसायी) का मागलाई सम्बोधन गरेर समेटेर लान सक्ने क्षमता मसँग मात्र छ । म जनरल व्यवसायबाट अटोमोबाइल व्यवसायमा लागेको भएर आज आएर आयात वितरण र डिलर, पार्ट्सको रूपमा पनि काम गरेको छु ।
यसले गर्दा मेरो सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व रहेको र मेरो प्यानलमा पनि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेकाले गर्दा मेरो जित सुनिश्चित रहेको छ । मेरो प्यानलमा पनि विभिन्न क्षेत्रका पार्टका व्यवसायीहरू, कर्पोरेट व्यवसायी, विद्युतीय सवारीका व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ, दुईपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रेका सबै व्यवसायीहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ । यसले गर्दा मेरो प्यानल महिला प्रतिनिधित्वसहितको समावेशी प्यानल भएकाले गर्दा पनि भोलि गएर सबैको माग सम्बोधन हुने र समावेशी प्यानल बन्ने भएकाले गर्दा जित्ने आधार पर्याप्त रहेको छ ।
सरकारी नीतिहरूको विषयमा नाडाले गर्दा लबिङ विशेष गरेर कमजोर रहेको छ । यसका लागि हामी काम गर्नेछौं । साथै नाडाको संस्थागत सुधार गरेर सचिवालयलाई बलियो र सक्षम बनाउनेछौं ।
नाडाको सचिवालयलाई हामी काठमाडौंबाहिर पनि लैजाने तयारीमा छौँ । प्रदेशहरूमा नाडाको सचिवालय आवश्यक छ । यसरी नीतिगत सुधार गर्दै संस्थाको हकहितमा काम गर्ने योजना छ । मेरो प्यानलमा पनि धेरै नयाँ अनुहार छन् । सबै खालका व्यवसायलाई समेटेर लैजाने मेरो एजेन्डा छ ।
विगतमा साना व्यवसायीले कर्पोरेट व्यवसायीको मात्र नाडामा हाबी भयो भन्दै आएका थिए । पछिल्लो समय भने साना व्यवसायीको बाहुल्य भयो भनिन्छ नि ?
हाम्रो अनुमानमा १० हजार व्यवसायी अटो व्यवसायमा संलग्न छन् । हामीले सबैलाई समेट्न सकेका छैनौं । हामीसँग आबद्ध ३२ सयमात्रै हो । अटोमोबाइल व्यवसायीहरू बढ्दै गएका छन्, त्यसै आधारमा सदस्यता बढ्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार सर्भिस सेन्टर आबद्ध हुन सक्दैनन् । विधानतः आइसकेका मेम्बरहरूलाई हटाउन पनि मिल्दैन ।
संख्यात्मक रूपले धेरै देखिँंदैमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भन्न मिल्दैन । पहिले थोरै संख्यामा चुनाव हुने गथ्र्याे भने अहिले ठूलो संख्यामा हुने गरेको छ । हिजोका दिनमा एक किसिमको सिन्डिकेट थियो, जसले गर्दा पुराना अनुहार मात्रै दोहोरिने प्रचलन थियो । कतै सानो सूचना निकाल्ने, नोमिनेसन कहिले, अन्य प्रक्रिया कहिले भन्ने आफूलाई मात्रै थाहा हुने गरी निकाल्ने चलन थियो ।
त्यसकै आधारमा आफ्ना मान्छे भर्ने र आफैं संस्थामा हाबी हुने प्रचलन थियो । मैले उम्मेदवारी दिएपछि यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ । मेरो प्यानलमा पनि धेरै नयाँ अनुहार छन् । सबै खालका व्यवसायलाई समेटेर लैजाने मेरो एजेन्डा छ ।
अहिले विद्युतीय सवारी साधन व्यक्तिगत तथा पर्यावरणका हिसाबले पनि उपयुक्त भएको छ । संसारका सबै कम्पनी परिष्कृत भएर आएका छन् । हामीले पनि नेपालमा विद्युतीय सवारीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौं । नाडाले सरकारसँग विद्युतीय गाडीका सम्बन्धमा लबिङ पनि गर्दै आएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सहुलियत दिने काम भयो, गत वर्ष हटाइयो । पछि मिडिया तथा सरोकारवालाको आवाजका कारण सरकार पछि हट्यो । विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोटमा हामी पनि लागेका छौँ भने सरकारलाई पनि घचघच्याएका छौं । आउने कार्यसमितिले पनि विद्युतीय सवारी साधन र पर्यावरणमा ध्यान दिनेछ । नीतिगत परिवर्तनका नयाँ कार्यसमिति लबिङमा लाग्नेछ ।
पछिल्लो समय नाडाले नीतिगत सुधार र पहलमा चुकेको हो ?
त्यस्तो हैन । नाडाले सरकारसँग सहकार्य गर्दै नीति निर्माणमा सहयोग र सहकार्य गर्दै सुझाव पेस गरेर काम गरेको छ । कोभिडका कारण हाम्रो कार्यसम्पादनमा केही कमी आएको भए पनि पहलकदमीमा हामीले काम गर्दै आएका छौं ।
नाडामा प्यानल नै घोषण गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको अवस्था छ । एउटै व्यवसाय गर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीहरू विभाजनतर्फ लाग्ने देखियो, हैन ?
हिजोको दिनमा पनि एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढ्ने काम भएकोमा अब तोड्ने काम भएको छ । चुनाव भएमा धु्रवीकरण हुन्छ कि भन्ने सवाल छ । यसमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । सकेसम्म मिलेर जाने भनेर लागेको हो, तर मिल्न सकिएन । चुनावको दिनसम्म धु्रवीकरणजस्तो देखिएपछि चुनावलगत्तै यसको अन्त्य हुनेछ । हामी सबै व्यवसायी हो, राजनीतिमा जस्तो शत्रुता हुँदैन ।
सरकारले पछिल्लो समयमा एसेम्बल उद्योगमा जोड दिएको छ । आगामी दिनमा नयाँ नाडा कार्यसमिति आएपछि कसरी सहजीकरण गर्दै जान्छ ?
एसेम्बलिङको मुद्दा मेरो प्रमुख एजेन्डा हो । यसको सम्बन्धमा नीति बन्नु जरुरी छ । जबसम्म नीतिगत व्यवस्था हुँदैन तबसम्म लगानी गर्न कठिन हुन्छ । एसेम्बल प्लान्टहरू भविष्यमा आउन सक्ने उच्च सम्भावना भएकाले नेपालमा यसका लागि कार्यनीति तय गर्नुपर्छ । यसमा सरकारलाई हाम्रो सरसल्लाह दिनेछौँ ।
सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै गएको छ । सवारी साधन भनेको विलासिताको वस्तु मात्र नभएर अब अनिवार्य आवश्यकताको वस्तुका रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।
अन्त्यमा, सबै व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेतृत्व छान्नुपर्छ ।
हाम्रो अनुमानमा १० हजार व्यवसायी अटो व्यवसायमा संलग्न छन् । हामीले सबैलाई समेट्न सकेका छैनौं । हामीसँग आबद्ध ३२ सयमात्रै हो । अटोमोबाइल व्यवसायीहरू बढ्दै गएका छन्, त्यसै आधारमा सदस्यता बढ्नु स्वाभाविक हो ।
हामीले पनि नेपालमा विद्युतीय सवारीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौं । नाडाले सरकारसँग विद्युतीय गाडीका सम्बन्धमा लबिङ पनि गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष सहुलियत दिने काम भयो, गत वर्ष हटाइयो ।